Factory vita amin'ny PVC & fingotra malefaka - Mpanamboatra sy mpamatsy vita amin'ny vatan-kazo malefaka any Shina
Ny entana malefaka PVC dia malaza eran'izao tontolo izao, tsy maninona na ao anaty trano na eo am-baravarana. Miaraka amin'ny toetra malefaka sy mora vidy, ny fitaovana Soft PVC dia natao ho vokatra maro, izay mitana andraikitra lehibe kokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Jereo fotsiny ny manodidina anao, tsy afaka manana fiainana mety isika raha tsy misy ny zavatra malefaka PVC, toy ny rojom-bolo malefaka PVC, sary miendrika PVC malefaka, fehin-tànana malefaka PVC, fantsom-pifandraisana vita amin'ny fantsom-baravarankely malefaka, tagan'ny valizy malemy PVC, andriamby vata fampangatsiahana malefaka, malefaka Medaly pvc sy Etc. Mora tokoa izy ireo hanatrarana ny tanjona hita maso sy miasa miaraka amina singa kely miloko, hanomezana fahafaham-po ny fampiasana isan'andro ataon'ny olona ary hanaovana doka ny fikambanana amin'ny karazana fotoana rehetra. Ny ankamaroan'ny entana Soft PVC dia azo atao amin'ny endrika 2D sy 3D, ny endriny dia azo namboarina, miaraka amin'ny fomba isan-karazany hametrahana ireo logo. Ny fotoana famokarana dia fohy kokoa noho ny hafa, malefaka amin'ny fotoana firaka sy ny vidiny isika. Ny fanontanianao dia tsy maintsy karakarain'ny ekipanay mahomby ao anatin'ny 24 ora fiasana. Ny tolotra manokana dia azo omena entana be dia be.
Sarivongana sary an-tsehatra Miniature / Anime an'ny PVC